सेमील्ट विशेषज्ञ र ndash; एनालिटिक्स रेफ्ररर / भूत स्पैम अवरुद्ध
सेमील्ट विशेषज्ञ र - एनालिटिक्स रेफ्ररर / भूत स्पैम अवरुद्ध
धेरै वेबमास्टरहरू र साधारण साइट मालिकहरू थाहा छैन के भूत वा रेफरर स्पाम हो। यी तपाईंको Google Analytics मा दुई विशिष्ट डोमेन प्रकारहरू छन्। हैकरहरू स्प्याम botnets प्रयोग गरेर हाम्रो साइटमा नक्कली ट्राफिक खिलौना पठाउँछन्, र बटहरू र धेरै मानिसहरू उनीहरूलाई छुटकारा पाउन कसरी थाहा छैन। हेराइहरू तपाईंको साइट हो रही होईन व्यक्तिहरू तर बट द्वारा। यस्तो साइटमा तपाईंको साइटमा हानिकारक छ किनकि यसले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स तथ्याङ्क र डेटा प्रदूषित गर्दछ।
तपाईं Google Analytics स्प्यामबाट छुटकारा पाउन अधिकतम म्याक्स, ग्राहक सफलता प्रबन्धकको प्रबन्धक सेल्टल्ट द्वारा प्रदान गरिएको केही रणनीति र तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ।
यातायात स्पैम तथ्याङ्क
विभिन्न रिपोर्टहरू र सैकड़ों हजार Google Google खाताहरूको विश्लेषणले देखाएको छ कि ट्राफिक स्प्याम एक प्रमुख समस्या हो र यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सकिन्छ। इन्टरनेटमा अर्ध बिलियन वेबसाइटहरू भन्दा बढी दैनिक रूपमा नकली र स्प्याम ट्राफिक प्राप्त गर्छन्। सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो हो कि तिनीहरूको मालिकहरूले स्प्यामबाट छुटकारा पाउन र समस्या समाधान गर्न कसरी थाहा पाउँदैनन्। हजारौँ डोमेनहरू किन खरिद गरिएका छन्, र वेबसाइटहरु सिर्जना गरी प्रमाणित र वास्तविक वेबसाइटहरूमा स्प्याम पठाउनको लागि बनाईएको छ। यहां सम्म कि AliExpress, eBay, Amazon, र Semalt जस्तै साइटहरु हाल मा मा स्पैम द्वारा संक्रमित भएको छ। नक्कली डोमेनहरूले तपाइँ संक्रमित लिङ्कहरूमा रिडिरेक्ट गर्दछ, तपाईंको साइट र यसको लेखलाई हानिकारक बनाउँछ। Source - parco giochi caserta cm.
विश्लेषक स्प्याम को प्रकार
सन्दर्भको स्प्याम दुई मुख्य प्रकारहरू छन्: क्रलर स्प्याम र भूत स्प्याम। क्रलर स्प्यामले तपाइँको वेबसाइटलाई बेनामीको रूपमा भ्रमण गर्छ। यदि तपाईले जैविक ट्राफिक वा अकार्बनिक ट्राफिक प्राप्त गर्नुभएमा पहिचान गर्न र निरीक्षण गर्न गाह्रो हुन्छ। जब तिनीहरू तपाइँका वेबसाइटहरू भ्रमण गर्छन्, यो मौलिक जस्तो देखिन्छ, र तपाइँको साइट धेरै पटक हिट हुन्छ। अर्को प्रकार भूत स्प्याम हो जसले तपाईको Google एनालाइटिक्सलाई सीधा प्रभाव पार्छ। तपाईलाई यो तथ्यबाट अवगत हुनुपर्दछ कि भूत स्प्यामले तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्दैन। यसको सट्टा, यो तपाईंको Google Analytics को सर्भरमा नकली हिटहरू पठाउन मापन प्रोटोकॉलहरूको प्रयोग गर्दछ। यो धेरै खतरनाक छ र पहिलो प्रकार भन्दा धम्की छ किनकी यसले सीधा तपाईंको गुगल एनालिटिक्सलाई असर गर्छ र तपाईंको वेबसाइटसँग केहि गर्न सक्दैन।
भूत, रेफरल र एनालिटिक्स स्पाम कसरी रोक्न?
भूत, एनालिटिक्स वा भूत स्प्यामलाई रोक्नको लागि थुप्रै तरिकाहरू छन्। तपाईं आफ्नो फाइल र हैशगबाट भूत स्प्याम फिल्टर वा ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं भूत स्प्यामबाट छुटकारा पाउन होस्टनाम फिल्टरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो नकली वा कुनै होस्टनामहरू प्रयोग गर्दछ। क्रलरको स्प्यामबाट छुटकारा पाउन, तपाईंले आफ्नो सेटिङ समायोजन गरेर आफ्नो डाटाबाट हटाउनुपर्दछ। तपाईंको Google Analytics मा अभियान स्रोत फिल्टर तपाईंको काम को सजिलो र छिटो बनाउन सक्छ। हटाउन सजिलो छ र तपाईंको साइट दुर्घटनाग्रस्त हुनबाट रोक्न सम्भव हुन सक्दछ। स्प्यामबाट छुटकारा पाउने सबै भन्दा राम्ररी तरिका हो कि तपाइँ विभिन्न प्रकारको फिल्टरहरू प्रयोग गर्न र सम्भवतः चाँडै सम्बन्धित प्लगइनहरू स्थापना गर्नुपर्छ। यसले तपाईंको सेटिंग्स समायोजन गर्न धेरै समय लाग्दैन। एकपटक गरेपछि, तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईको साइट र Google Analytics मालवेयर र भाइरसबाट सुरक्षित छन्। तपाई सधैँ सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंका फाईलहरू कहीं अफलाईनमा सुरक्षित राख्नुहोस्। यो पनि तपाईंको फाइलहरु र आलेखहरुलाई समर्थन दिइन्छ।